Ny maha-olombelona hatramin'ny ela no nikasa ny hanangana rafitra goavambe, anisan'izany ny fanaovana sary sokitra. Noho izany, dia nahatratra 36 metatra ny haavon'ny Kolosin'i Rhodes, naorin'ny Grika fahiny tao amin'ny seranan-tsambon'i Rhodes, ary namely ny olona niaina tamin'ny andro fahiny. Fa ny sarivongana fanta-daza dia lavitry ny sary sokitra maoderina, ny habeny dia avo roa heny kokoa.
Iza no sarivongana ambony indrindra eto an-tany, ary asa inona no asongadina eo amin'ny lisitr'ireo sarivongana ambony indrindra eran-tany? Ho hitanao ny valiny ato amin'ity lahatsoratra ity. Tsara homarihina fa ny lisitra dia ahitana tsangambato maneho ny tanjona amin'ny fitomboana feno, noho izany dia tsy misy lisitra ao amin'ny lisitra, ohatra, sary vongana momba ny emperora Jan sy Huang, izay avo 106 metatra.
Top 10 tsangambato ambony indrindra eran-tany
Ao amin'ny Boky Guinness Records, ny sary sokitra "Spring Buddha", any amin'ny faritanin'i Henan renivohitra, dia nampidirina ho ny sarivongana ambony indrindra eran-tany ary ny sarivongana lehibe indrindra amin'ny andriamanitra - ny Bouddha. Ny haavon'ny sarivongana goavam-be miaraka amin'ny fanontana dia 153 metatra, ny haben'ny Bouddha dia 128 metatra. Ho an'ny ho avy, misy ny fikasana hampitombo ny haavon'ny sarivongana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny fitrandrahana ny rindrina. Ny sandan'ny tetikasa dia 55 tapitrisa dolara. Ny lanjan'ny Bouddha dia eo amin'ny 1000 taonina, ary 1100 varahina varahina no nampiasaina tamin'ny famoronana azy.
Ny toerana faharoa koa dia mipetraka amin'ny sarivongan'i Buddha. Ny sarivongana 130 metatra ao amin'ny sehatry ny Laukun dia ao Myanmar, any amin'ny faritanin'i Sikain. Mahavariana fa natsangana ilay rafitra tsy nisy fanampiana tamin'ny vano.
Amin'ny toerana fahatelo koa dia sarivongan'i Boddha - Amitabhi, miorina ao an-tanànan'i Ushiku. Ny haavon'ny haavon'ny toerana avo indrindra dia 120 metatra. Ao anatin'ilay rafitra dia misy ny ascenseur izay misandratra eo amin'ny sehatra fiambenana. Ny habeny mampitolagaga ny sarivongana dia aseho amin'ny hoe ny rantsan-tànan'ny Bouddha tsirairay dia maharitra 7 metatra!
Amin'ny toerana fahaefatra dia sary sokitra 108 metatra ny Bodhisattva andriamanibavy, any Chine, ao amin'ny faritanin'i Guangyin. Ny fanapahan-kevitry ny zavakanto momba ny sary sokitra dia mahaliana: ny sarivongana telo mitambatra dia maneho ny fisian'ny andriamanitra tamin'ny lasa, ny ankehitriny ary ny ho avy, raha ny marina, maneho ny tsy fahafatesan'ny Bouddha.
Ny sarin'ny Pôrtogey Krisht Rey (Kristy Mpanjaka) izay 103 metatra ny haavony, mifanaraka tanteraka amin'ny sarin'ny sarin'i Kristy ao Rio de Janeiro . Saingy ny sarivongana lehibe indrindra an'i Jesoa Kristy dia noheverina ho endrika ara-pikajan'i King of Christ any Polonina. Na dia 52 metatra aza ny haavon'ny sary sokitra, fa eo amin'ny tranokely kely kosa dia mifanohitra amin'ny sarivongana portiogey. Mahavariana ny habetsahan'ny tànan'Andriananahary - 25 metatra ny elanelana eo amin'ny borosy!
Ny toerana fahenina sy fahafito dia nozarain'ny sary sokitra patriotic: Ny renin'ny vato ao Kiev renivohitra Okraina ary ny "Betela antsoina"! Ny haavon'ny tarehimarika majestika dia tena goavana: ny haavon'ny 102 metatra. Ny sarivongan'i Volgograd no sarivongana ambony indrindra ao Rosia, ary ny sarivongan'i Kiev dia any Ukraine. Ireo tarehimarika vehivavy roa ireo dia hita ao amin'ny toerana tsy hay hadinoina: ny Okrainiana akaikin'ny tranombakoka repoblikana an'ny Ady Lehibe Patriotic, sy ny Rosiana - ao anatin'ny antokom-pinoana "Heroes of the Battle of Stalingrad" ao Mamayev Kurgan.
Ny haavon'ny Sendai Daikannon no sarivongan'i Kannon ao Bahrain any Japon, ao amin'ny faritr'i Tohoku, efa ho 100 metatra.
Ny toerana faha-9 manan-kaja dia tsangambato ho an'i Peter I ao Moskoa. Ny tsangambato vita amin'ny bronze-steel dia 96 metatra ambony no natsangana teo amin'ny tokotanin'ny artifisialy tao amin'ny reniranon'i Moscow.
Ny sarivongana amerikana malaza 93 metatra ao Liberty any New York dia mameno ny tampon'ny sarivongana ambony indrindra sokajy. "Lady Liberty" - fanomezana avy any Etazonia avy any Frantsa hatramin'ny taonjato faharoan'ny Revolisiona Amerikana. Avy amin'ny satroboninahitra, izay azo atrehin'ny tohatra, dia manokatra fomba fijery malalaka amin'ny seranana. Ny trano fanontam-pirinty dia misy tranom-bakoka momba ny tantaran'ny trano, izay misy ny fiakarana.
Sehatry ny Azerbaijan
UAE - visa ho an'ny Rosiana
Gatchina - toetrandro
Sicily - manintona
Filtra ho an'ny rano ao amin'ny tranon'olon-tsotra
Ny tsibon'ny dibera amin'ny ovaire
Ahoana no hanangom-boankazo ao amin'ny vinaingitra - fomba mahandro tena tsara ho an'ny mahandro sakafo
Ahoana no hankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny zaza iray - 1 taona?
Ureaplasma nandritra ny fitondrana vohoka
Sakafo varim-bazaha miaraka amin'ny atody - recipe
Fitsipika fototra momba ny fifandraisana
Angony daholo ny lokon'ny avana!
Cutlets avy amin'ny kobam-bozaka
Prolactinoma amin'ny glandy
Mitafy fanjaitra avy amin'ny "Grass"
Famaritana ny fiarovana
Lasagna misy henam-bary ao amin'ny oven - recipe
Fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena - ahoana no hijerena tsara tarehy sy vehivavy amin'ny hetsika rehetra
Nitrates amin'ny sakafo
Trano fandraisam-bahiny ho an'ny vehivavy
Jama avy amin'ny kesika - tsara sy ratsy